Ku daalay Android oo hadda ku boodaan markabka si macruufka? Mase ka Android inay macruufka waa caqabad weyn, ka dib oo dhan, ma ahan wax sahlan si ay u gudbiyaan files u dhexeeya laba dhufto ee aad u kala duwan. Dareen careysan? Isdeji. Halkan waa ilaha gaarka ah si ay kaaga caawiyaan in aad u maamulaan si ay u gudbiyaan xiriirada, music, videos, sawiro, fariimaha qoraalka ah, barnaamijyadooda iyo kalandar ka phone Android jir ama kiniin in qalab macruufka ah oo aan ka kaaftoomi kasta.
Free Solution MobileTrans (qalab A mushaarka badan)
Xiriirada Xiriirada nidaameed la Google / iCloud
Kalandarada Jadwalka nidaameed la Google
SMS Jidka No heli karaa
Music / Video / Sawiro Nidaameed la Lugood warbaahinta
Apps Download dukaanka Lugood App Ma taageero
Soo qaado dhowr daqiiqo
Bedelka oo dhan xiriirada, music, videos, sawiro & SMS isku mar 1 click.
Qaado hal ama laba maalmood si uu shuqulka goobidda iyo kala iibsiga file
Wareejiyo oo keliya mid ama laba nooc oo files waqti
Qaar ka mid ah xal ku guuldareysto in ay ka shaqeeyaan
Ma aha lacag la'aan ah. Ma u baahan tahay inaad bixiso.
Oon karin inay barnaamijyadooda
Xalka 1: xiriirada Transfer, jadwalka taariikhda, barnaamijyadooda iyo warbaahinta files for free
Xalka 2: Demi waxyaabaha ka Android inay macruufka la MobileTrans
Xalka 1: xiriirada Transfer, jadwalka taariikhda, barnaamijyadooda iyo warbaahinta for free
1. xiriirada iyo kalandar Transfer ka Android inay qalab macruufka
Habka 1. nidaameed Android iyo macruufka qalabka xiriirka la Gmail iyo kalandar
Qaar ka mid ah telefoonada Android kasoo muuqan u hagaagsan Google ka, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si hagaagsan aad xiriirada Android inay account Google ka dibna u hagaagsan account Google ee aad iPhone.
On telefoonka aad Android, tuubada Dejinta > Accounts & hagaagsan . Raadi Gmail iyo geli xisaabta Gmail.
Tubada nidaameed Xiriirada iyo jadwalka nidaameed .
Tubada nidaameed Hadda si hagaagsan xiriirada Gmail iyo calenadrs la telefoonka aad Android.
Hadda, dhammaan dadka ay khuseyso iyo kalandar telefoonka aad Android wareejiyo in aad xisaabta Google.
On aad macruufka qalab socda macruufka 7, tuubada Settings > Mail, Xiriirada, Kalandarada > dar xisaabta > Google .
Input magaca, email, sirta ah iyo sharaxaad. Markaas, shid Kalandarada iyo Xiriirada si hagaagsan in aad iPhone.
Riix halkan si aad u barato sida loo hagaagsan xiriirada Google marka qalab macruufka ah waxa macruufka 5 ama 6.
Habka 2. Upload Android file VCF in Gmail ama iCloud
Ma aha in dhamaan telefoonada Android waxay leeyihiin muujinta u hagaagsan Gmail. Maxaad samayn kartaa marka telefoonka aad Android ma ogola in aad si hagaagsan oo Gmail? Halkan tagaa tallaabooyinka.
Raadi Import / Dhoofinta dooro dhoofinta kaydinta USB . By default, file VCF la magacaabi doonaa sida 00001.vcf.
Tubada nidaameed Xiriirada . Haddii aad sidoo kale doonayaa inaan u hagaagsan taariikheed, kaliya ka jaftaa jadwalka nidaameed .
Bareesada ee cable USB Android in ay ku xidhmaan telefoonka aad Android inay kombiyuutarka. Marka aad kaarka SD Android lagu muujiyay sida drive USB ah, waxaa la furo iyo heli file VCF ah.
Log galay Gmail account internet-ka. Markaas, guji saddexagalka ee soo socota si ay u Gmail. In dhibic ka hoos menu, dooran Xiriirada .
Riix More > Import ... > Dooro File . Dul file VCF oo guji Open si ay u geliyaan. Markaas, guji Import in ay dajiyaan aad xiriirada Android in aad xisaabta Gmail.
Fur aad iPhone iyo xiriirada Gmail u hagaagsan in aad iPhone.
Gmail ka sokow, waxa kale oo aad gali kartaa VCF in ay iCloud.
The 3 tallaabo hore la mid yihiin kuwa kor ku xusan.
Saxiix in aad xisaabta iCloud in www.cloud.com ah.
Riix Xiriirada oo taga si geeska hoose ee bidix si guji tab menu.
Dooro Import vCard . Browser A booda. Raadi faylka VCF iyo soo dejinta inay iCloud.
Tubada Settings aad iPhone oo ka jaftaa iCloud in imput xisaabtaada iCloud iyo password.
Markaas, waxaad tagtaa Xiriirada app iyo hubi xiriir ah.
2. nidaameed music, sawiro iyo videos ka Android inay macruufka via Lugood
Marka loo eego xidhiidhka u kala iibsiga Android inay macruufka, kala iibsiga warbaahinta soo baxday in ay si fudud ku noqon. Raac tutorial fududaynay hoos ku qoran:
Kombiyuutarka Connect qalab Android aad la cable USB ah.
Fur galka Android card SD iyo dhoofin aad heeso doonayay, videos iyo sawiro in kombiyuutarka.
Burcad Lugood. Riix File > dar File inay Library ... si ay u dajiyaan music ee Android oo videos inay Library Lugood ah.
Riix si aad iPhone markii uu na tusay hoos AALADAHA . Markaas, ee guddiga midig, guji Photos , Music , Movies iwm si ay u hagaagsan ee files warbaahinta Android in aad iPhone.
3. Download ay barnaamijyadooda isla dukaanka App
Chine guuray Android inay macruufka waa shaqo adag, ay sabab u tahay qaabab kala duwan oo ay app. Si kastaba ha ahaatee, weli waa mid ka mid hab waxaad isku dayi kartaa, in uu yahay, duuban ee Chine isla app dukaanka Lugood.
Maxay ku saabsan barnaamijyadooda aad ka iibsaday dukaanka Play Google ama dadka kale? Xaaladdan oo kale, inaad si fiican u la tasho lahaa xarunta adeegga macaamiisha si ay u weydiiso haddii aad u haajiraan laga yaabaa inuu ka version Android inay saaxiibtinimo macruufka ka mid ah.
Xalal badan oo lacag la'aan ah maadaama ay jiraan, mid ka mid xaqiiqda aad qabto in ay la kulmaan waa in ay shaqada waqti lumis iyo daalin ah. Qaar ka mid ah xal free kaliya loo isticmaali karaa on qaar ka mid ah telefoonada Android oo kiniin ah. Taa ka sii daran, files music video iyo qaar ka mid ah, sida AAC, OGG, MP2, si fiican u ciyaareyso qalabka Android aad, ma taageersana by qalab macruufka ah. Waxyaalahan oo dhan ayaa laga yaabaa in aad ka soo dejiyeen.
Xalka 2: 1 click si ay u gudbiyaan xiriirada, videos, jadwalka taariikhda, music, fariimo iyo sawiro ka Android inay macruufka la MobileTrans
Ma rabtaa inaad wax walba ku wareejin ka Android inay macruufka dadaal iyo fudayd? Isku day inaad ka Wondershare MobileTrans ama Wondershare MobileTrans u Mac . Waxaa loo sida qalab kala iibsiga phone xirfad, waxay awood aad si ay u gudbiyaan dhammaan xiriirada labada telefoonka aad Android iyo daruur, music, videos, jadwalka taariikhda, sawiro iyo fariimaha qoraalka ah ka qalab Android inay qalab macruufka la click hal. Marka MobileTrans ogaadaa music iyo videos aan lagu ciyaari karin ku saabsan qalabka macruufka, oo waxa uu xitaa si toos ah iyaga loogu badalo kuwo la socon kara macruufka.
Download version maxkamad free of Wondershare MobileTrans ah. Markaas, raac tutorial fududaynay la version Windows ah. The version Mac shaqaysaa si la mid ah.
Tallaabada 1. Isku aad qalabka Android iyo macruufka in kombiyuutarka
Burcad Wondershare MobileTrans iyo xirmaan labada qalab Android iyo qalab macruufka ah in kombiyuutarka via fiilooyinka USB. Xusuusnow in Lugood u baahan tahay in lagu xiro in la damaanad qaado kala iibsiga files.
Fiiro gaar ah: . Wondershare MobileTrans ayaa si buuxda u la jaan qaada macruufka qalab macruufka socda 5/6/7/8/9, iyo qalab badan Android, sida Samsung, LG, HTC, Sony, Motorola, Huawei More halkan >>
Tallaabada 2. ka dhaqaaq Android inay macruufka
Marka laba qalab ku xiran yihiin, dhammaan faylasha loo gudbin karaa waa la saxay. Markaas, bilowdo kala iibsiga faylka adigoo gujinaya Start Copy.
> Resource > macruufka > Sida loo soo biiray Android inay macruufka